FAQs - Shanghai Huizhou Industrial Co., Ltd.
Mirary ny valin'ny fanontanianao rehetra etsy ambany.
Raha tsia dia azafady mifandraisa aminay. Faly izahay fa manana ny fangatahanao bebe kokoa.
Inona ny atin'ny fonosana ranomandry?
Ny akora fototra (98%) dia ny rano. Ny ambiny dia polymer mpitroka rano. Polymer mpitroka rano manamafy ny rano. Matetika ampiasaina amin'ny diapers izy io.
Poizina ve ny atiny ao anaty fonosan'ny gel?
Ny atiny ao anaty fonosan'ny gel misy antsika dia tsy misy poizina Tatitra fanapoizinana am-bava mahery vaika, fa TSY natao ho laniana io.
Fa maninona no tsy tokony hodinihiko ny fonosana No Sweat Gel?
Tsy misy fonosana Sweat Gel mitroka hamandoana ka miaro ny vokatra alefa amin'ny fanondranana izay mety hitranga mandritra ny fitaterana.
Mijanona ho mangatsiaka intsony ve ny biriky？
Mety hitranga, saingy misy fiovana maro amin'ny fandefasana izay mamaritra ny halavan'ny fotoana nazeran'ny biriky na gel. Ny tombony voalohany amin'ny birikinay dia ny fahaizan'ny biriky hitazonana endrika tsy miova & mifanaraka amin'ny toerana tery kokoa izy ireo.
Mandra-pahoviana ny kitapom-bolanao?
Betsaka ny miovaova izay misy akony amin'ny fahombiazan'ny fonosana ranomandry, ao anatin'izany:
Ny karazana fonosana ampiasaina - oh: biriky ranomandry, tsy misy fonosana gilasy sns.
Ny niandohana sy ny toerana itondrana ny entana.
Ny faharetan'ny faharetan'ny fonosana dia mijanona ao anaty mari-pana maripana manokana.
Ny fepetra farafahakeliny farafahakeliny sy / na mari-pana be indrindra mandritra ny fotoana fandefasana.
Maharitra hafiriana ny hatsiaka fonosana gel?
Ny fotoana hampihenana ny fonosana gel dia miankina amin'ny habetsahana sy ny karazana vata fampangatsiahana ampiasaina. Ny fonosan'ny isam-batan'olona dia afaka mangatsiaka haingana toy ny ora vitsivitsy. Ny habetsaky ny paleta dia mety maharitra hatramin'ny 28 andro.
Azo ampiasaina amin'ny faritra amin'ny vatana ve ny fonosanao？
Ny vokatray dia novolavolaina mba hitondra hatsiaka ho an'ny manodidina. Izy ireo dia azo ampiharina amin'ny sakafo mifandraika amin'ny sakafo sy ny fanafody.
Inona avy ireo vokatra mety aminao?
Ny karazana fonosana vita amin'ny insulated dia mety amin'ny fandefasana ny vokatra mora tohina rehetra. Ny sasany amin'ireo vokatra sy indostria arosonay dia misy:
Sakafo: hena, akoho amam-borona, trondro, sôkôla, gilasy, malama, varotra, zava-maniry ary zavamaniry, kitapo fihinana, sakafon-jaza
Misotro: divay, labiera, champagne, ranom-boankazo (jereo ny vokatra fonosana sakafonay)
Fanafody: insuline, fanafody IV, vokatra azo avy amin'ny ra, fanafody veterinera
Indostrialy: fifangaroana simika, mpampifamatotra, reagents fitiliana
Fanadiovana sy fanatsarana tarehy: Detergents, shampooing, savony nify, fanasana vava
Ahoana no fidiako ny fonosana tsara indrindra ho an'ny vokatra products
Satria tsy manam-paharoa ny fampiharana fonosana vokatra mora tohina amin'ny hafanana; azonao atao ny manamarina ny «vahaolana» ao an-tranonay raha te hahita, na miantso na mandefa mailaka aminay anio raha mila tolo-kevitra manokana momba ny fiarovana azo antoka ny fandefasana ireo vokatrao.
Fanohanana ho an'ny mpanjifa
Azoko ampidirina ao anaty fonosana ve ny sary famantarana ny orinasako?
Ie. Misy ny pirinty sy ny endriny manokana. Misy farafahakeliny sy sarany fanampiny azo ampiharina. Afaka manome fampahalalana amin'ny antsipiriany bebe kokoa ny mpiara-miasa aminao.
Ahoana raha toa ka tsy mandeha amin'ny fampiharana ny vokatra novidiko？
Miezaka ny tratry ny herinay izahay hanomezana fahafaham-po ny mpanjifa 100%.
Matetika izahay dia manoro hevitra ny hizaha ny vokatray alohan'ny hividianana. Hanolotra am-pifaliana ireo santionany amin'ny fizahan-toetra tsy andoavam-bola izahay hahazoana antoka, mialoha, fa hameno ny zavatra takian'ny fampiharana anao manokana ny fonosinay.
Azoko ampiasaina indray ny fonosana ranomandry?
Azonao ampiasaina indray ireo karazana sarotra. Tsy azonao ampiasaina indray ilay karazana malefaka raha rovitra ny fonosana.
Ahoana no ahafahako manary fonosana ranomandry?
Tsy mitovy ny fomba fanariana arakaraka ny fitantanan-draharaha. Azafady mba zahao amin'ny tompon'andraikitra eo an-toerana. Matetika io no mitovy amin'ny diapers.